Mirror girazi Vagadziri & vanotengesa - China Mirror girazi Fekitori
Girazi regirazi sirivheri inogadzirwa nekupenda sirivheri nhete uye mhangura pamusoro pepamusoro-soro girazi rinoyerera kuburikidza nemakemikari deposition uye nzira dzekutsiva, uyezve ndokudira iyo yekutanga uye topcoat pamusoro pechinhu chesirivheri nhete uye yendarira simbi yesirivha unodzivirira. Yakagadzirwa. Nekuti inogadzirwa nemakemikari maitiro, zviri nyore kumakemikari kuita nemhepo kana hunyoro uye zvimwe zvinhu zvakapoteredzwa panguva yekushandisa, zvichikonzera iyo pendi dura kana sirivheri dhizaini kubvarura kana kudonha. Naizvozvo, kugadzirwa kwayo uye nekugadzira tekinoroji, nharaunda, Zvinodiwa kuti tembiricha uye mhando zvinyoronyoro.
Magirazi emhangura-emahara anozivikanwawo semagirazi ane hushamwari. Sezvinoreva zita iri, magirazi acho haana zvachose mhangura, izvo zvakasiyana nemagirazi ane huronyo.